काठमाडौं। इन्टरनेट र कम्प्युटर हाम्रो जीवनको एक अभिन्न पाटो बनिसकेको हुँदा वास्तवमा हामीले दिनहुँ कम्प्युटर सुरक्षाबारे सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ।
वाईफाई नेटवर्क घर, कार्यलय जहाँसुकै ह्याकर तथा खराब पात्रहरुको निशानामा हुन्छ। यसैले जहिले पनि सुरक्षा अत्यावश्यक हुन्छ।
होम(घरेलु) नेटवर्कमा ह्याकरहरुलाई चासो हुँदैन भन्ने भ्रम धेरैजनालाई हुन्छ। यसैले हामीमध्ये धेरैले होम नेटवर्क सुरक्षित राख्ने कुरामा सधै लापारवाही गरिरहेका हुन्छौं। तर याद राख्नुहोस्। तपाईंको सानोभन्दा सानो कुरा पनि एकदमै संवेदनशिल हुन्छ र त्यो ह्याकरको हातमा परेको अवस्थामा तपाईंलाई अपुरणीय नोक्सानी हुन सक्छ। अझ महामारीको यो समय धेरैले घरबाट काम गरिरहेका छन्।
कार्यालयका संवेदनशिल तथ्याङ्क सबै कुरा तपाईंकै घरेलु नेटवर्कभित्र बसेको हुन्छ। यस्तो बेला तपाईंको नेटवर्क नै असुरक्षित भइदियो भने सम्पूर्ण जानकारी तथा तथ्याङ्क ह्याकरहरुको हातमा पुग्न सक्छ। यसैले आफ्नो घरेलु वाईफाई नेटवर्कको बारेमा सधै ध्यान दिनुहोस्। वाईफाईलाई सुरक्षित राख्न आज हामी तपाईंलाई केही टिप्सहरु दिँदै छौं।
सुरक्षाका लागि एउटा अचुक मन्त्र भनेको ‘चाँडै र निरन्तर सेक्युरिटी प्याच’ राख्नु नै हो। आफ्नो नेटवर्कको सबै एक्सेस प्वाइन्ट, मोडेम र राउटरहरुमा प्याच राख्नुहोस्। साथै नेटवर्कमा कनेक्ट भएका सबै डिभाइसहरुमा पनि प्याच दिनुहोस्।
आफ्नो फर्मवेयर कहिले अपडेट भएको हो त्यो पनि चेक गर्नुहोस्। अपडेट छैन भने त्यसलाई ढिला नगरी प्याच उपलब्ध गराउनुहोस्।
डिभाइसमा अटोमेटिक अपडेट इन्स्टल हुने गरी सेटिङ मिलाउनुहोस् । यदि डिभाइस निर्माणकर्ता कम्पनीले प्याच उपलब्ध गराउन छोडेको हो भने अर्कै डिभाइस प्रयोग गर्न थाल्नुहोस्।
२.इन्क्रिप्सन सेटिङलाई चेक गर्नुहोस्
हामी तपाईंलाई कम्तिमा पनि WPA2-PSK (AES) इन्क्रिप्सन प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छौं, जसलाई WPA2-CCMP भनिन्छ। पीएसकेको अर्थ ‘प्रि(शेयर्ड की’ हो। यो एक किसिमको पासवर्ड हो जसलाई तपाईंले पहिलो स्थानमै नेटवर्कसँग कनेक्ट गर्नुपर्दछ।
ध्एब्द्द लाई पहिलोपटक वाईफाई अलायन्सले २००४ मा अनुमोदन गरेको थियो। यदि तपाईंले प्रयोग गरेको राउटरले ध्एब्द्द लाई सपोर्ट गरेन भने नयाँ मोडलमा अपग्रेड हुनुहोस्।
डब्ल्युईपी अर्थात् वायर्ड इक्युभ्यालेन्ट प्राइभेसी कहिल्यै पनि प्रयोग नगर्नुहोस्। किनभने यसले प्रयोग गर्ने इन्क्रिप्सन सिस्टम केही वर्षअघि पुरै क्र्याक भएको थियो। यसले झूठो सुरक्षा मात्र दिन्छ ।
आफ्नो वाईफाई नेटवर्क सुरक्षाका लागि बलियो र राम्रो पासवर्ड छनौट गर्नुहोस्। सजिलो पासवर्ड सबैलाई मुखाग्र हुन सक्छ। यस्ता पासवर्ड साथीभाइलाई दिँदा वा उनीहरुको डिभाइसमा राखिदिँदा उनीहरुले सजिलै याद गरेर त्यसको दुरुपयोग गर्न सक्छन्।
यसैले बाहिरी मान्छेहरुले सजिलै थाहा पाउन नसक्ने किसिमका पासवर्ड चयन गर्नुहोस्। घरमा आउने जोकोहीको डिभाइसमा पासवर्ड राखिदिने बानी पनि त्याग्नुहोस्। यदि कुनै अतिथिको मोबाइलमा वा डिभाइसमा पासवर्ड राख्नु भएको छ भने उसले प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई तत्काल परिवर्तन गरिदिनुहोस्।
४. वाईफाईमा को छन चेक गर्नुहोस्
सुरक्षाका लागि आफ्नो वाईफाई नेटवर्कमा कुनकुन डिभाइसको एक्सेस छ भनेर हेर्ने गर्नुपर्दछ। धेरै राउटरहरुको म्यानेजमेन्ट पेज जुन तपाईंको वेब ब्राउजरबाट खोल्न सकिन्छ, त्यहाँ नेटवर्कमा कनेक्ट भएका डिभाइसहरु हेर्न मिल्छ। यदि कुनै अनाधिकृत डिभाइस तपाईंको नेटवर्कभित्र छ भने त्यसलाई डिस्कनेक्ट गरिदिनुहोस्। अझ वाईफाई पासवर्ड बदल्नु यस्तो बेला उपयुक्त उपाय हो।
आईओटी अर्थात् इन्टरनेट अफ थिङ्क्स भनेका ती उकपरण हुन्, जुन कम्प्युटर वा मोबाइल होइनन् तर इन्टरनेटको मद्दतले सञ्चालन हुन्छन्।
उदाहरणका लागि वेबक्याम, स्मार्ट स्पिकर, डुअर बेल, स्वचालित कार आदि। यी आईओटी डिभाइसहरु वाईफाई नेटवर्कमा जोडिएर स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुन्छन्। तपाईंको आईओटी डिभाइसलाई सुरक्षित राख्न केही टिप्सहरु तल राखिएका छन्।
क.तपाईंले प्रयोग गरिरहेका आईओटी डिभाइसलाई मात्र अनलाइन राख्नुहोस् अन्यथा त्यसको पावरअफ गरेर राख्नुहोस्।
ख. डिभाइस अपडेट भइरहेको कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्।
ग. डिभाइसलाई सही तरिकाले कन्फिगर गर्नुहोस्।
घ.डिफल्ट पासवर्ड जस्ता रिस्की सेटिङलाई परिवर्तन गर्नुहोस्।
ङ. कति डेटा शेयर गरिरहनु भएको छ, चेक गर्नुहोस्।
च.सकेसम्म आईओटी डिभाइसलाई ‘गेस्ट’ नेटवर्कमा राख्नुहोस्।
छ. उपलब्ध भएसम्म ‘क्लाइन्ट आइसोलेसनलाई’ टर्न अन गर्नुहोस्।
ज. तपाईंलाई समस्या पर्दा कसलाई टर्न गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा पाइराख्नुहोस्।